नेप्सेले भन्यो - सूचीकृत कम्पनीले वार्षिक नविकरण शुल्क बुझाउनू - सिम्रिक खबर
नेप्सेले भन्यो – सूचीकृत कम्पनीले वार्षिक नविकरण शुल्क बुझाउनू
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्सेले सूचीकृत कम्पनीलाई वार्षिक नबिकरण शुल्क बुझाउन अनुरोध गर्दै सूचना जारी गरेको छ ।आर्थिक बर्ष २०७७/०७८को धितोपत्र वापतको बार्षिक नविकरण शुल्क धितोपत्र सुचिकरण विनियामावली २०७५ को अनुसूचीमा भएको व्यवस्था अनुसार बुझाउन नेप्सेले भनेको हो । उक्त रकम असोज मसान्त सम्म बुझाउन आग्रह गरिएको छ ।
५०करोडसम्म चुक्तापूँजी भएका कम्पनीले वार्षिक नबिकरण शुल्क बापत रू. ५० हजार र रू. ५० करोडभन्दा माथिका कम्पनीले रू.१ लाख बुझाउनु पर्नेछ । त्यसैगरी डिबेञ्चर म्युचुअल फण्डको चुक्तापूँजी रू. ५० करोड भएकाले रू. २५ हजार र रू. ५० करोडभन्दा माथि भएकाले रू. ५० हजार वार्षिक नबिकरण शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । सूचीकृत सम्पूर्ण कम्पनीहरुले नविकरण शुल्क बापतको रकम ग्लोबाल आइएमई बैंकको ७५०१०१००००७७५ खातामा नम्बरमा पठाउनु पर्नेछ । साथै नेप्सेले उक्त खातामा रकम जम्मा गरेको भौचर इमेल गर्न सकिने भएको छ । इमले आइडी -listing@nepalstock.com